Taageerayaasha Croatia oo sameeyay qalalaasihii lagu yaqaanney + Sawirro – Gool FM
(Saint-Etienne) 17 Juunyo 2016 – Taageerayaasha Croatia ayaa bulalleeyro kusoo tuuryeeyay garoonka kulankii ay kooxdoodu iska khasaarisay fursad ay 2-0 kaga badin kartey Czech Republic balse ku idlaatay 2-2.
Xulka Croatia ayaa markii hore u muuqdey mid badiska iska leh oo soo hooyn raba wax noqon lahaa maalin taariikhi ah, balse taasi waxay isu rogtey qaraar iyo qalalaase lagusoo afjaray rigoore uu daqiiqaddii 93-aad ka dhaliyey Tomas Necid.
Yeelkeede, taageerayaasha Croatia oo ku caan baxay foowdo iyo cunsuriyad ayaa sheekooyinkoodii la kala baxay iyagoo ciyaarta gaysiin gaarey in gebi ahaanba la joojiyo, waxaana la arkayey laacibiinta Croat-ka oo ka baryaya inay wax iskula haraan.
UEFA ayaa la filayaa inay dib u eegis iyo go’aanba kasoo saarto qaaquullooyinkan ay sameeyeen taageerayaasha Croatia.
GOOGOOSKA: Spain vs Turkey 3-0 (Spain oo seddexeeyay Talyaaniga & Faransiiska)